Minisitry ny fampianarana ambony “Horaisiko ny Seces !”
Zanaky ny faritra Sofia Tsy ekena ny fanosoram-potaka ny Minisitry ny fanabeazana
Manoloana ilay resabe tao anatin’ny tambajotran-tserasera facebook mikasika ilay vatomamy mitentina 8 miliara Ar saika hovidian’ny Ministeran’ny
Ny fikarohana dia maro no efa azo ampiasaina avy hatrany eto Madagasikara fa isika no tsy mbola tena mahafantatra tsara, hoy ny minisitry ny fampianarana ambony vaovao,
Blanche Nirina Richard, raha naneho ny heviny mikasika ny maha zava-dehibe ny fihaonamben’ireo oniversite miisa 12 aty afrika mikaroka momba ny fisorohana sy fitantanana ny loza nanomboka omaly talata 30 hifarana anio alarobia 31 jolay etsy amin’ny hotely Colbert. Hataon’ny minisitera laharam-pahamehana ny fampahafantarana ny toeram-pikarohana sy ireo vokatra azo ampiasaina avy hatrany toy itony, hoy izy. Farany teo, ohatra, dia nisy sehatra iraisampirenena nifanakalozan’ny Malagasy tamin’ny any ivelany rehetra. Iarahantsika mahafantatra ny ivontoerana Conficius. Toerana ahafahana mifandray amin’izao tontolo izao ireny, indrindra, ny firenena sinoa. Eo an-dalana ny minisitera amin’izao fotoana izao mitsirika ireo toeram-pikarohana misy ka izay efa mahomby dia hampiana hatrany ary ireo marefo koa dia hamafisina bebe kokoa. Ny asa rehetra vita teo aloha dia hotohizana sy hamafisina. Mikasika ny olan’ny sendikan’ireo mpampianatra mpikaroka dia raisiko ny SECES sampana Antananarivo sy ireo solontenan’ny SECES rehetra, hoy izy, ary aorian’izay no hisy vaovao azo omena bebe kokoa.